Taratry ny kanto - ewa.mg
News - Taratry ny kanto
“Donak’afo”-n’ny poeta –
mandra-maraina eny Malaza Andoharanofotsy, anio zoma 16 oktobra
2020 izao ry Nofy no Voary sy ny mpiara-misehatra amin’ny
literatiora. Hetsika mandra-maraina hanentanana ny
rehetra tsy ankanavaka, na mpankafy na mpanoratra na mpandala ny
maha Malagasy izy ity. Hiainga etsy amin’ny Tahala Rarihasina,
anio, amin’ny 3 ora tolakandro ny fotoana ho an’izay rehetra
Isambilo Dozera – RN7
Hitondra ny hatsikana « Mamely
akaiky » etsy amin’ny Lapa RN7 Soanierana (Tsy lavitra ny
peter motors sy france rider) Isambilo Dozera, amin’ny
asabotsy 17 oktobra 2020 ho avy izao, manomboka amin’ny 4 ora
hariva. “Hatsikana ranoiray amin’ilay vaovao be no hoentiko
amin’io, hanomezana fahafahampo ny mpankafy tao anatin’izay
fihibohana izay”, hoy Isambilo Dozera.
L’article Taratry ny kanto a été récupéré chez Newsmada.
FAKAFAKA: Ovay ny toe-tsaina !
Fomba fitenin’ny sasany efa zary nankalilo sofina ny hoe « ovay ny toe-tsaina ». Asa raha mba manao izany ry zareo mpiteny azy io na mpitari-bato vilam-bavana? Ovaina manao ahoana ary io toe-tsain’ny Malagasy io? Fa impiry hanova toe-tsaina ny Malagasy? Tsy efa novain’ny mpanjakazaka an-tanin’olona ho “zarazarao hanjakana” ve ny “firaisankina no hery”? Tsy efa novain’ireo tsy mataho-tody ho voavidy vola ve ny “an’Andriamanitra ny aina”? Tsy efa novain-dry manam-pahaizana ho zava-doza amin’antambo ve ny fiheveran’ny Malagasy ny antsoina hoe “ody” ka nanjary tsy sitrana ny marary raha tsy ilay “comprimé” vidina any amin’ny « pharmacie » no ampiasaina ? Sao mba tsy hoe “ovay ny toe-tsaina” no tokony hotenenina fa hoe: “ avereno amin’ny maha Malagasy anao io toe-tsainao io”? Samihafa tanteraka mantsy ny manova sy ny mamerina na ny miverina.Na efa am-polo taona maro aza no nitenenana ny hoe “ovay ny toe-tsaina”, tsy nahitam-bokatsoa izany. Vao mainka fiovana any amin’ny lalana tsy izy isan’andro isan’andro no hita eo amin’ny Malagasy. Tsy Fandikana be fahatany ny zava-misy sy tenenina any ivelany no nahatonga io “ovay ny toe-tsaina” io. Tsy mety mandaitra eto ilay izy satria tsy izany no takin’ny hasina ananan’ity tany ity fa ny fiverenana amin’ny tena toe-tsaina malagasy mifanaraka amin’ny soatoavina malagasy, manaja ny fahendrena, ny fomba amam-panao, ny teny, ny finoana, ny tantara, sns.Tsy midika ho fiverenan-dalana akory ny fitazonana sy fanajana ary fanomezan-kasina ny maha izy ny tena. Ampifanarahana amin’ny zava-misy sy mitranga ao anatina vanim-potoana izy ireny ka avy amin’izany no miteraka ny tena “fandrosoana” ho an’ilay firenena sy ny mponina ao aminy. Tsy nisy sy tsy misy ary tsy hisy izany firenena handroso amin’ny fihindramana “zavatry ny hafa” izany.… Izay fahalalana izay no fantatry ny sasany ka mahatonga azy tsy haka na hindrana ny an’ny hafa intsony fa avy hatrany dia manao bodongerona sy mangalatra an-kitsirano izao. Misora-tena ho tompony na tsy izany aza no marina!HaRy Razafindrakoto L’article FAKAFAKA: Ovay ny toe-tsaina ! a été récupéré chez Newsmada.
Ambalavao: tratra ireo jiolahy namaky fiangonana
Voasambotry ny polisy ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny halatra sy ny vaky trano tao amin’ny fiangonana zandriny ao Ambalavao Tsienimparihy. Araka ny fanazavan’ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’Ambalavao, ny 25 jona 2019 lasa teo, novakin’olona ny trano lehibe iray ampiasain’ny fiangonana zandriny roa atao trano fivavahana ao Ambalavao. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ireo entan’ny fiangonana rehetra , toy ny seza, ny fanamafisam-peo, ny zavamaneno, ny ridao. Niroso tamin’ny fanadihadiana avy hatrany ny polisy ka tratra ireo jiolahy roa tompon’antoka tamin’ity famakiana ny trano fiangonana ity. Niaiky ny heloka vitany ireo jiolahy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Efa tafaverina amin’ny fiangonana ireo entana halatra rehetra ankoatra ireo tany amin’ireo mpividy halatra.J.CL’article Ambalavao: tratra ireo jiolahy namaky fiangonana a été récupéré chez Newsmada.
Nandritra ny fihibohana: nihena 25% ny taham-pahasitranan’ny ankizy noraisina tao amin’ny CASAN
Nihena ny fanatonan’ny olona mpisitraka ny ivontoerana manome tantsoroka ara-tsosialy sy fandraisana an-tanana ny tsy fanjarian-tsakafo (CASAN) eny Antohomadinika izay tohanan’ny Action contre la faim, araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra, Rakotondraina Mialy, ny herinandro lasa teo. 18 isam-bolana sisa ny olona vaovao tonga nandritra ny fihibohana nanomboka ny volana marsa ka hatramin’ny mey raha 50 izany mialoha ny fametrahana ny hamehana ara-pahasalamana. Najanona ihany koa ny fitiliana faobe ny tsy fanjarian-tsakafo teny anivon’ny fokontany niasana ho fisorohana ny famoriana vahoaka sy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy nikatona ny foibe CASAN fa nahena kosa ny fotoana hijanonan’ny olona mila tolotra. Raha tokony haraha-maso ny fivoaran’ireo zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika antonony (MAM) manaraka fitsaboana eo anivon’ny foibe, tsy afaka natao izany ka manova ny vokatra eo amin’ny fahatsaran’ny fahasalaman’ny zaza. Nandritra ny volana febroary ka hatramin’ny avrily, nidina ho 25% ny tahan’ny fahasitranana teo amin’ireo ankizy noraisina an-tanana. Manodidina ny 100 eo ho eo ny zaza iantsorohan’ny foibe isam-bolana. Maharitra telo volana ny faharetan’ny fandraisana an-tanana ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika antonony. Efa niakatra ho 62% ny tahan’ny fahasitranana ny volana jona lasa teo satria niverina tsikelikely ny hetsika samihafa. Nanampy ny vehivavy hiatrika ny fiainana ao anaty fihibohana ny ekipa sosialy eo amin’ny foibe.Nirongatra ny herisetraTsapa fa nirongatra ny herisetra miseho ao an-tokantrano tao anatin’ny fihibohana noho ny fahasorenana ateraky ny toerana kely misy ny ankohonana. Tsy vitsy koa no tsy maharaka ny fepetra ara-pahasalamana satria vidiana ny rano sy ny savony nefa ny asa fivelomana voasakan’ny hamehana ara-pahasalamana. Anisan’ny antony tsy nahazoana vokatra tsara koa teo amin’ny fahasitranan’ny kilonga raisina an-tanana ny tsy fanajana ny fanomezana ny plumpy sup ny zaza marary fa amidy izany havadika vola.Vonjy A.L’article Nandritra ny fihibohana: nihena 25% ny taham-pahasitranan’ny ankizy noraisina tao amin’ny CASAN a été récupéré chez Newsmada.
Minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina: notsidihina ny Rovan’Ilafy sy ny tranon-dRainilaiarivony
Taona 2019, nametraka fanamby ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina ny hanarina sy ny hanamboatra ireo fotodrafitrasa mirakitra ny tantara tsy hay hadinoina. Tafiditra ao anatin’izany ireo mozea, ny rova, sns.Nitsidika ny Rovan’Ilafy sy ny Tranon’ny Praiminisitra Rainilaiarivony ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana Andriatongarivo, omaly. Raha ny momba ny Rovan’Ilafy manokana, efa nirosoana ny fanamboarana ny anatiny sy ny ivelan’ny rova nanomboka tamin’ny fotoana nametrahan’ny minisitera fanamby ny amin’ny fanarenana izany. Nasiam-panavaozana avokoa ireo toerana rehetra natokana hanaovana ny fampirantiana ara-haifoko ao anatin’ny rova. Efa mamarana ny asa fanatsarana tanteraka ny orinasa miandraikitra izany amin’izao. Marihina fa ny taona 1982 no navadika ho lasa mozea ara-haifoko na “musée ethnographique ” ity lapa ity. Ampirantiana ao anatin’io lapa io avokoa ireo fitaovana rehetra nanamarika ny fiainan-dRadama II (nanorina ny Rovan’Ilafy) tamin’izany. Hita ao anatiny ihany koa ireo karazana fampirantiana ara-haifoko na ny “collection ethnographique “, entina hampahafantarana ny fomba mampiavaka faritra iray.Nifanindran-dalana tamin’ny fitsidihana nataon’ny minisitra Rakotondrazafy Lalatiana Andriatongarivo, omaly, ihany koa ny fijerena ny fivoaran’ny asa fanatsarana ny trano nipetrahan’ny Praiministra Rainilaiarivony, etsy Amboditsiry, tafiditra ao anatin’ny lisitry ny vako-pirenena nanomboka ny taona 1987. Amin’ny maha vako-pirenena azy izay, mipetraka ho fananan’ny fanjakana ihany koa ny toerana sy ny fotodrafitrasa rehetra ao anatiny. Manana adidy lehibe ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina handray an-tanana ny fanatsarana azy. Ezahina ny hamerina ny endriny ivelany sy anatiny nahafantarana ity vakoka ity hatramin’izany, hanajana ny fenitry ny fanarenana vakoka iray na ilay antsoina hoe “codes architecturaux originaux “.Nanangona: HaRy RazafindrakotoL’article Minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina: notsidihina ny Rovan’Ilafy sy ny tranon-dRainilaiarivony a été récupéré chez Newsmada.
Roa taona tsy nilatsaka ny orana: mponina maherin’ny 5 000 nifindra monina noho ny kere
Tsy azo iainana intsony ny any amin’ny misy azy ka tapa-kevitra. Maherin’ny 5 000 ireo mponina nilefa nandositra ary nifindra monina noho ny kere mahery vaika.Tonga nihazo ny any Tsivory, 160 km miala an’Amboasary Atsimo, izy ireo ary mbola mety hihoatra io aza ny tarehimarika, raha ny nambaran’ny mpitondra fivavahana any an-toerana, omaly. Tsy vitan’izany fa anjatony ireo mitokona eo an-tokotanin-dry masera sy ny fiangonana katolika any an-toerana, miandry fanampiana amin’ny alalan’ny sakafo. “Tsy misy intsony ny azo omena noho ny tsy fisian’ny sakafo”, hoy ny mompera, Rafanomezantsoa Mbola.Misy mangalatra hatramin’ny lovia sy ny vilany… Manampy trotraka izany, tsy misy intsony koa ny omby angalarina ka ataon’ny dahalo majifa ireo fitaovana sy ny kojakoja ao an-tranon’ny mponina. “Mirongatra ny halatra lovia sy ny vilany… Milefa mandositra any anaty ala ny mponina ary mitady sakafo any nefa mbola misy maka koa ny kely azo amin’izany. Miraviravy tanana ka lasa mandositra miakatra an-tanàn- dehibe ireo mponina”, hoy ihany izy. Ahitana zaza amam-behivavy sy zokiolona ireo mpifindra monina, nandao ny tananany ireto noho ny haintany mafy mamely ny any an-toerana.Tsy vao voalohany ny tranga any Amboasary Atsimo Tsy nisy rotsak’orana tao anatin’ny roa taona. Tsy misy koa izany ny vokatra.Efa nijery ifotony izao toe-draharaha izao ny mpitantana any an-toerana. Anisan’izany ny eo anivon’ny fiadidiana ny faritra, saingy tsy mbola nisy tohiny, hatramin’ny omaly.Tsiahivina fa efa nitranga ny kere tahaka izao ny taona 2016. Niverina indray izany izao ary mihamafy kokoa aza.Synèse R.L’article Roa taona tsy nilatsaka ny orana: mponina maherin’ny 5 000 nifindra monina noho ny kere a été récupéré chez Newsmada.